”Permis biométrique” hosoka: rava ny tambajotra mpanao kolikoly, arahi-maso akaiky ny lehiben’ny Cim | NewsMada
Tsy vao izao! Efa hatry ny ela ny nahahenoam-baovao ny kolikoly ao amin’ny foibe mpanome laharana fiarakodia (Cim) Ambohidahy, amin’ny fikarakarana fahazoan-dalana mitondra fiarakodia, indrindra ny fahazoana ny ”permis biometrique”. Nisy ireo voarohirohy nosamborina, ny taona 2017, saingy tsy mbola foana izany satria nitohy.
Araka ny fanadihadiana natao, nisy nampandre ny Bianco fa misy manamboninahitra iray ao amin’ny toby Capsat Soanierana, sy ny vadiny, ahina ho manao ”permis” hosoka, fitondrana fiara ho an’ny miramila any an-tranony eny Itaosy, ka hovaina ho ”permis biométrique” eny amin’ny foibe Cim Ambohidahy. Fantatra taorian’ny famotorana ny mety hisian’ny tambajotra amin’izany, ary anisany ny ao amin’ny foibe Cim Ambohidahy. Voalaza fa anisan’ny manao kolikoly koa izy ireo amin’ny famindrana ny fitompoana fiarakodia sy ny fahazoana ”permis”.
Voarohirohy ny olona 18
Araka ny voalaza etsy ambony, maro ny fitarainana azon’ny Bianco mikasika ny kolikoly ao amin’ny Cim Ambohidahy. Anisan’izany ny nataon’ny fikambanana fiarahamonim-pirenena Rohy, ny taona 2017, nahatrarana olona roa tompon’andraikitra tao, ka nampidirina vonjimaika am-ponja. Misy koa ny raharaha hafa amin’ny kolikoly, ny fanaovana taratasy hosoka, maha voarohirohy olona miisa 18, ka anisan’izany ny lehiben’ny Cim, ilay manambonihaitra ao amn’ny Capsat sy ny vadiny, ary olon-kafa miisa 15.
Taorian’ny fiatrehana ny fampanoavana, ny 13 avrily teo, naiditra vonjimaika am-ponja ny olona telo, mpanera. Arahi-maso ara-pitsarana kosa ny lehiben’ny Cim Ambohidahy sy ny mpitambola ao amin’ity foibe ity.